UPDATE: R/Wasaaraha Lubnaan oo xilka iska casilay | Somalia News
Baarlamaanka Soomaaliya Oo Ansixiyey Xukuumada Rooble
Kulan ay maanta xaruntooda KMG ee Villa Hargeysa ay ku yeesheen mudanayaasha golaha shacabka, uuna shir gudoominayey gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan ayaa raysal wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble waxaa uu golaha horkeenay xukuumadiisa, isagoo waydiistay in ay kalsoonida siiyaan.Raysal Wasaare Rooble ayaa xusay in xukuumaddiisu ay diiradda saari doonto dardargalinta hawlaha doorashada, amniga goobaha doorashadu ka dhacayso, la dagaalanka cudurka Covid-19, adeegga bulshada, cadaaladda iyo dawlad wanaagga. Sidoo kale Xukuumadda ayuu xusay inay mudnaan gaar ah siindoonto ilaalinta xuquuqul insaanka, gaar ahaan difaaca Haweenka iyo carruurta, iyadoo la xoojinayo wada-shaqaynta hay’adaha u xilsaaran difaaca dhibanayaasha. “Xukuumadda oo kaashaneysa Dowladaha Xubnaha ka Ah DF, waxay dardar-gelinaysaa dadaallada dhammaystirka dib-u-eegista Qorshaha Amniga ee xilligan muhiimka ah. Waxa aan shaki ku jirin in fulinta qorshahan uu siin-doono shacabka, hay’adaha dowladda iyo ciidamada amnigu fursad ay si wadajir ah u sugayaan xasilloonida iyo nabadda dalka”. RW Rooble Mudanaayasha golaha shacabka ayaa codka kalsoonida u qaaday xukuumadda cusub, waxaana ogolaaday 188-mudane, mana jirin cid ka aamustay ama diiday, sida uu ku dhawaaqay Gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sh Cabdiraxmaan. Golaha wasiirada oo ka kooban 27-wasiir, 17-wasiir dawle iyo 26-wasiir ku xigeen oo uu Ra’iisal wasaaraha dalka magacaabay 19-kii bishan ayaa lagu hor dhaariyey golaha shacabka, waxaana ay dhawaan xubnaha ku cusub xukuumaddu ay la wareegi doonaan xilal kooda. Ugu dambayn Raysalwasaare Rooble ayaa uga mahadceliyey golaha shacabka ansixinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda, si ay u gutaan shaqooyinka adag ee laga sugayo, isagoo tilmaamay in Xukuumaddiisu ay mudnaan gaar ah siin doonto wax ka qabashada xadgudubyada ka dhanka ah qeybaha bulshada ee nugul. Horseed Media
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh oo ka hadlay ansixitan xubnaha cusub iyo Qorshaha Golaha Xukuumadda ayaa sheegay in kukuumadaan cusub looga fadhiyaa qabsoomidda doorasho waqtigeeda ku dhacda. Daawo Hadal Jeedintii Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Goobjoog News
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo Golaha Shacabka horgeeyey xubnaha cusub iyo Qorshaha Golaha Xukuumadda ayaa xusay in barnaamijka Xukuumaddu ay saldhig u yihiin arrimaha hortabinta u leh dalka oo ay ugu horreyso qabsoomidda doorashooyinka, adkeynta amniga, horumarinta caddaaaladda, dowlad-wanaagga, kordhinta adeegyada aas-aasiga ah ee bulshada. Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay wadajir ugala shaqeynayso Dowladaha Xubnaha ka ah DF iyo shacabka Soomaaliyeed suggida aminga xilliga Doorashadda, Iyadoo laga amba-qaadayo go’aanadii ka soo baxay shirarkii Samareeb iyo midkii ka danbeeyey ee Golaha Wadatashiga Qaranku ay ku heshiiyeen Muqdisho, 17kii Sebtember 2020, laguna qeexayay qaabka doorashooyinka, ergooyinka, deegaan doorashada, qoondada haweenka iyo in ay doorashooyinku ay ku dhacaan waqtigooda. “Xukuumadda oo kaashaneysa Dowladaha Xubnaha ka Ah DF, waxay dardar-gelinaysaa dadaallada dhammaystirka dib-u-eegista Qorshaha Amniga ee xilligan muhiimka ah. Waxa aan shaki ku jirin in fulinta qorshahan uu siin-doono shacabka, hay’adaha dowladda iyo ciidamada amnigu fursad ay si wadajir ah u sugayaan xasilloonida iyo nabadda dalka”. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa uga mahadceliyey Golaha Shacabka ansixinta Xukuumadda iyo barnaamijkeeda, si ay u gutaan shaqooyinka adag ee laga sugayo, isagoo tilmaamay in Xukuumaddiisu ay mudnaan gaar ah siin doonto wax ka qabashada xadgudubyada ka dhanka ah qeybaha bulshada ee nugul. Daawo Hadal Jeedintii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Goobjoog News
Dowladda Hindiya oo ka hadashay muwaadiniinta looga heysto Muqdisho
©(GEESGUUD.COM) SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD New Delhi (Caasimadda Online) – Dowladda Hindiya ayaa ka hadashay muwaadiniinta la sheegay in looga heysto magaalada Muqdisho, waxeyna sheegeen iney ka shaqeyn doonaan sidii loo sii deyn lahaa. Wasiirka arrimaha dibadda Hindiya Subrahmanyam Jaishankar ayaa sheegay iney wadaan dadaalo ay ugu gar-gaarayaan shaqaalaha reer Hindiya kuwaas oo la sheegay iney dhibaato ku heyso gudaha Soomaaliya. […] READ THE FULL ARTICLE FROM GEESGUUD.COM This article is copyright © GEESGUUD.COM The post Dowladda Hindiya oo ka hadashay muwaadiniinta looga heysto Muqdisho appeared first on SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Dowladda India oo war ka soo saartay 33 muwaadin oo looga haysto Muqdisho
New Delhi (Caasimadda Online) – Dowladda Hindiya ayaa ka hadashay muwaadiniinta la sheegay in looga heysto magaalada Muqdisho, waxeyna sheegeen iney ka shaqeyn doonaan sidii loo sii deyn lahaa. 33 muwaadiniin ah oo u dhashay dalkaas ayaa lagu warramay inay afduub ku haysato shirkad Soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda […] The post Dowladda India oo war ka soo saartay 33 muwaadin oo looga haysto Muqdisho first appeared on Caasimada Online.
UPDATE: R/Wasaaraha Lubnaan oo xilka iska casilay
Beirut (Halqaran.com) – Ra’iisul wasaaraha dalka Lubnaan Xasan Diab ayaa ku dhawaaqay inuu xilka isaga degay, kaddib qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada Beirut oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof.
RW Xasan Diab ayaa is-casilaaddiisa ka sheegay telefishinka Qaranka ee dalkaasi.
Shacabka dalkaasi ayaa tilmaamaya inay ahayd in xilli hore si wanaagsan oo taxadar leh looga fekero, keydinta maadada ammonium nitrate ee Talaadadii ku qaraxday dekadda Beirut ee dalkaasi.
Waxay kaloo mas’uuliyiinta dowladda Lubnaan ku eedeeyeen inay wadaan falal musuq-maasuq ah iyo maamul xumo.
Madaxweyne Mishaal Cown ayaa sheegay in 2,750 tan oo ah maadada ammonium nitrate si aan ammaan ahayn loogu keydiyay makhaasiin halkaa ku yaallay muddo lix sano ah.
Previous articleTurkiga oo ballan-qaaday inuu dib u dhisayo dekedda uu qaraxa burburiyay ee Beirut
Next articleImpact of COVID-19 on agriculture, food systems and rural livelihoods in Eastern Africa: Policy and programmatic options – Burundi – ReliefWeb
(London) 24 Okt 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha West Ham United iyo Manchester City, kuwaasoo ku ballansan kulan qeyb ka ah horyaalka Premier League. Pep Guardiola ayaa kulankan ku bilaabay Aguero, Mahrez, Sterling iyo Rodri, halka safka West Ham United ay hoggaaminayaan Antonio, Masuaku iyo Ogbonna. Haddaba halkaan hoose ka eeg safafka labada kooxood ay ku soo geli doonaan oo dhammaystiran:- Safka hore ee West Ham: Fabianski, Ogbonna, Cresswell, Antonio, V. Coufal, Masuaku, Balbuena, Soucek, Bowen, Rice, Fornals. Keydka West Ham: Randolph, Noble, Yarmolenko, Lanzini, Haller, Fredericks, Diop Safka hore ee Man City : Aguero, Walker, Gundogan, Mahrez, Sterling, Cancelo, Ederson, Ruben Dias, Bernardo, Rodri, Eric Garcia. Keydka Man City: De Bruyne, Stones, Zinchenko, Z. Steffen, Ferran Torres, Foden, C. Palmer Gool FM. Let’s block ads! (Why?)
Shaxda Rasmiga Ah Ee West Ham Vs Man City? Guardiola Oo Ku Soo Galay Shax Adag.
Tababaraha Man City ee Pep Guardiola ayaa soo saaray shaxda uu kaga hor iman doono West Ham kulan ka tirsan todobaadkii 7-aad ee horyaalka premier League. Guardiola ayaa ku soo galay shax adag isaga oo weerarkiisa ku bilaabay xiddigaha Sterling, Aguero, Mahrez kuwaas oo hogaaminaya weerarka Sky Blues. Dhanka kale Xiddiga De Bruyne ayaa kaydka ka soo muuqday kadib markii uu dhaawac ku seegay labadii kulan ee ugu dambeeyay ee Man City. Shaxda Rasmiga Ah Ee Kulanka: West Ham: Ederson, Walker, Dias, Garcia, Cancelo, Gundogan, Rodrigo, Silva, Sterling, Aguero, Mahrez Kaydka: Steffen, Stones, Zinchenko, De Bruyne, Torres, Foden, Palmer Man City: Fabianski, Cresswell, Balbuena, Ogbonna, Masuaku, Rice, Soucek, Coufal, Fornals, Bowen, Antonio Kaydka: Randolph, Yarmolenko, Lanzini, Noble, Haller, Diop, Fredericks. Sii Akhriso: DEG-DEG: Baarlamaanka Somaliya Oo Ansixiyay Xukuumadii Uu Soo Dhisay Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble
Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta codka kalsoonida siyey Xukuumadda cusub ee Soomaaliya iyo Barnaamijkeeda. Golaha wasiirada uu soo dhisay Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ka kooban 71 xubnood ayaa waxaa codka siiyey 188 xildhibaan, mana jirin cid ka aamustay ama diiday, sidoo kalena ma jirin dood la geliyey barnaamijka xukuumadda cusub. Ad Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ayaa Baarlamaanka hortiisa ku dhaariyey Golaha Wasiirada cusub, iyadoo markaas kadib guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh uu kulanka soo xiray, una sheegay xldhibaannada inuu furan yahay kalfadhiga 7-aad ayna is dhex galeen kalfadhigii 8-aad. Ra’iisal wasaare Rooble iyo xukuumaddiisa ayaa heysta muddo saddex bilood ah, iyadoo xukuumaddan ay noqotay tii ugu waqtiga yareyd ee Soomaaliya, waxaana howsha ugu weyn ee hortaalla ay tahay qabashada Doorashooyinka 2020/2021. Warar Xul ah
Baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay xukuumadda cusub
MOGADISHU — Kulan uu shir guddoominayay Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Mursal oo Golaha Shacabku ay maanta yeesheen ayay ku ansixiyeen xubnaha golaha wasiirada ee uu dhowaan magacaabay Ra’isulwasaare Maxamed Xuseen Rooble. Ra’iisulwasaare Rooble oo baarlamaanka la hadlay ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ahmiyadda koowaad siin doonto qabsoomidda doorashooyinka dalka ka dhacaya, iyo sugidda amniga goobaha doorashooyinka. Waxaa kale oo uu sheegay in ay dardargelin doonaan la tacaalidda xanuunka COVID-19. Intaas ka dib ayay Golaha Shacabku waxa ay codka kalsoonida u qaadeen golaha wasiirada, iyadoo 188 xildhibaan ay oggolaadeen ansixinta xukuumadda cusub. Guddoomiyaha baarlamaanka oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in aysan jirin cid diiday ama ka aamustay. Ra’iisulwasaare Rooble ayaa 19-kii bishan ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban 27 wasiir, 17 wasiir-dowle, iyo 26 wasiir ku xigeen. Inta badan xubnaha xukuumadda cusub ayaa ah golihii wasiirada ee xukuumaddii uu baarlamaanku kalsoonida kala laabtay ee ra’iisulwasaarihii hore, Xassan Cali Kheyre.
Nin hubeesan oo doonayay in uu dil ka geesto Muqdisho oo isaga la dilay
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp - Advertisement - Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil maanta nin biskoolad ku hubeesnaa oo la tuhmayo in uu katirsanaa Al Shabaab loogu geestay xaafad katirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir . Wararka aan helnay ayaa sheegaya in ninka hubeesan la dilay xili uu doonayay in uu dilo askari katirsan ciidanka dowlada, goobjoogayaal ayaana ku waramay in askariga xabada kala hormaray ninka hubeesan ee doonayay in uu dilo. Goobta dilku ka dhacay ayaa waxaa sidoo kale ka baxsaday nin kale oo la socday ninka hubeesnaa ee la dilay, waxaana halka uu dilku ka dhacay soo gaaray saraakiil iyo ciidamo katirsan dowlada oo goobta ka qaaday ninka la dilay si baartitaano ugu sameeyaan. Inta badan kooxaha hubeesan ee dilalka geesta ayaa ka baxsan jiray gacanta ciidamada dowlada, mana ahan markii ugu horeesay oo la dilo rag hubeesan oo doonayay in ay fuliyaan dilal qorsheesan. Dilkan ayaana imaanaya xili saacadihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ka dhaceen dilal qorsheesan oo loo geestay askar katirsan dowlada Soomaaliya iyo dad shacab ah, waxaana baxsaday inta badan dadkii dilalkasi fuliyay. Xafiiska Shabakada Allbanaadir.comMuqdisho [email protected] - Advertisement - Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Previous articleBaarlamaanka Soomaaliya oo Codka Kalsoonida siiyay Golaha Wasiirada Soomaaliya
Updated on October 24, 2020 12:00 pm